အရင်ကဆိုရင်များအတွက်ချွေးပေါင်းအိမ် - အသွင်ကူးပြောင်းမှုဟာချွေးပေါင်းအိမ်ရကျိုးနပ်သည်အဘယ်ကြောင့်
တစ်ချွေးပေါင်းအိမ် session ရဲ့စံပြလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကဘာလဲ?
ပုံမှန်ချွေးပေါင်းအိမ်အစည်းအဝေးများမသာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနျြးမာရေးအတှကျကောငျးမှဖြစ်ကြသည်, ဒါပေမယ့်လည်းစနစ်တကျတစ်ချိန်ကအနားယူရန်။ မဟုတ်ဘာမျှမအဘို့, သန်းအပူပေးခန်း5အကြောင်း2လူဦးရေသန်းမှာဖင်လန်ရှိကြောင်းစစ်တမ်းတစ်ခု။ ဂျာမနီမှာတော့ ပို. ပို. လူတွေကခန္ဓာကိုယ်, အရေပြားနှင့်စိတ်ကိုရန်အများအပြားကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများကျိန်ဆို။
ပို. ပို. ကျောနာကျင်မှုသို့မဟုတ် -verspannungen ထံမှခံရသောသူလူတို့အဘို့လည်းချွေးပေါင်းအိမ်ထဲတွင် session တစ်ခုကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါချွေးပေါင်းအိမ်မျက်နှာကျက်ကနေအပူနောက်ကျောအပေါ်တိုက်ရိုက်ထွန်းလင်းနိုင်အောင်အကောင်းဆုံးရလဒ်များကိုအဘို့, နာကျင်မှုစိတ်ရှည်ခြင်း, ဝမ်းဗိုက်အပေါ်အများဆုံးအချိန်ထားသင့်ပါတယ်။ ဒါကမသာနောက်ကျောအတွင်းကြွက်သား, ဒါပေမယ့်လည်းစိတ်ဝိညာဉ်ကိုဖြေလျော့။ ဒါဟာအရေးကြီးပါတယ်သော်လည်းမငြိမ်ဝပ်စွာနေမှလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်, ဒါပေမယ့်ရံဖန်ရံခါလည်းတည်ငြိမ်တိုက်နယ်စောင့်ရှောက်ရန်, ထထိုင်ရန်။ အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းပြဿနာများပဲပုံမှန်ချွေးပေါင်းအိမ်အားဖြင့်လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။
ထိုကဲ့သို့သောဝက်ခြံအဖြစ်အချို့သောအသားအရေအခြေအနေများအတွက်တစ်ဦးကိုအပတ်စဉ်ချွေးပေါင်းအိမ် session တစ်ခုစီစဉ်ထားရပါမည်။ အပူ, အရေပြားအပေါက်ညင်ညင်သာသာ sebum နှင့်အတူပိတျဆို့နတေဲ့ထားတဲ့, dilated နေကြသည်။ ထို့ကြောင့်အနာပျောက်စေနိုင်သောဖြစ်စဉ်ကိုသိသိသာသာအရှိန်သည်။
ချွေးပေါင်းအိမ်ဟာခန္ဓာကိုယ်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုဘို့, ဒါပေမယ့်လည်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြန်လည်ထူထောင်ရေးများအတွက်အကြံပြုသည်သာ။ လူအတော်များများဟာနှစ်ဦးစလုံးအောင်မြင်စွာချွေးပေါင်းအိမ်တစ်အလည်အပတ်ခရီးနှင့်အတူလျှော့ချနိုင်ပါတယ်, စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုကနေပိုပြီးခံစားကြရသည်။ တစ်နှစျသိမျ့ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ချွေးအားဖြင့်သင်တို့ကိုလာမယ့်နံနက်အိပ်ပျော်ပိုမြန်လဲကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်ဆိုလိုတာက, ရာထူးတိုးကြောင့်တောင်မှအိပ်စက်ခြင်းအတွက်ကျနော်တို့က, ချွေးပေါင်းအိမ်တစ်အလည်အပတ်ခရီးအကြံပြုသောနေ့ရက်ကာလကိုစတင်နိုင်ပါသည်။
အပူလှုံ့ဆော်မှုချွေးပေါင်းအိမ်မြေတပြင်လုံးကလူတခုတခုအပေါ်မှာအလွန်အမင်းအပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ အဆိုပါဖြာအပူတစ်ခုလုံးကိုကိုယ်တည်းထဲသို့အရေပြားဖြတ်သန်းနှင့်တဦးတည်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်3°စင်တီဂရိတ်အထိမြင့်တက်။ လူအပေါင်းတို့သည်ဇီဝဖြစ်စဉ်လှုပ်ရှားမှုများတိုးမြှင့်နေကြသည်ဤဖြစ်စဉ်မှတဆင့်သည်, စောင်ရေနှိုးဆွနေသည်နှင့်ကာကွယ်ရေးသဘာဝကျကျခိုင်ခံ့စေ၏နေကြသည်။
•အချွေးပေါင်းအိမ်များတွင်သာရေချိုးသုတ်ပဝါနှင့်ဖိနပ်ကိုယူရပါမည်။ သူတို့ပူကိုမီးရှို့ကြပြီးဒဏ်ရာဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြောင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အားလုံးလက်ဝတ်ရတနာ, ကြိုတင်ဖယ်ရှားရမည်။ ယင်းအမြင်အာရုံအကူအညီကိုချက်ချင်းအခိုးအငွေ့နှင့်အတူတက် fogged လို့ဒါဟာမျက်မှန်ကိုထုတ်စေမှန်ဘီလူးဆက်သွယ်ပြန်ပြောင်း သာ. ကောင်း၏။
ဒီသံသရာများအတွက်အကောင်းဆုံးမဟုတ်ပါအဖြစ်•အဖြစ်ဝေးဖြစ်နိုင်သောကြောင့်, ထိုချွေးပေါင်းအိမ်သို့မဟုတ်ယခင်ကစိမ်းလန်းစိုပြေတဲ့အစားအစာကိုသှားဖို့ဆာလောင်မွတ်သိပ်ရှောင်ကြဉ်ရပါမည်။ အဘယ်သူမျှမအရက်အချိုရည်တစ်ချွေးပေါင်းအိမ် session တစ်ခုအတွင်းမှာသောက်ရပါမည်သကဲ့သို့။
•ပျမ်းမျှခန္ဓာကိုယ်အရည်ကခန္ဓာကိုယ်အဲဒီနောက်တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးပြန်ရောက်သင့်ပါတယ် 1 လီတာဖို့ချွေးပေါင်းအိမ်2အတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ နေဆဲဓာတ်သတ္တုရေအကောင်းဆုံးဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့သင့်လျော်သည်။
အစပိုင်းတွင်တစ်ဦးသုတ်ပဝါသည့်ချွေးပေါင်းအိမ်-goers ထိုင်သို့မဟုတ်အိပ်နိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေရာမှအလယ်သို့မဟုတ်အမြင့်ဆုံးဘဏ်မှာချွေးပေါင်းအိမ်ခန်းထဲမှာချရပါမည်။ တစ်ဦးကချွေးပေါင်းအိမ် session ကိုအကောင်းဆုံးမှာနှစ်ခုမှသုံးချွေးပေါင်းအိမ်အစည်းအဝေးများရှိရေးသငျ့သညျ။ ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ဖို့အပူတက်လာ 8 နှင့် 10 မိနစ်အကြားလိုအပ်ပါတယ်ဒါပေမယ့်အပြင်ဘက်မှအကူးအပြောင်းအစောပိုင်းကစတင်ခဲ့ခြင်းကိုမပြုမီပြီးသားမသက်မသာခံစားရသင့်တယ်သငျ့သညျ။
ပထမဦးဆုံးချွေးပေါင်းအိမ်သင်ခန်းစာကိုလေ့လာဆွေးနွေးပြီးနောက်, လေရေချိုးခန်းနှင့်ဓါတ်ကိုထိန်းသိမ်းဖို့နှင့်အတူ 20 တစ်မိနစ်ငြိမ်ဝပ်စွာနေရသောကာလအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်တစ်ဦးအေးမြသို့မဟုတ်အအေးရေချိုးခန်းအကြံပြုသည်။ အအေးရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်းစဉ်အတွင်းစောင်ရေထိန်းသိမ်းရန်, ရေပထမဦးဆုံးခြေထောက်နှင့်လက်မောင်းကိုကျော်ပြေးသာထို့နောက်ထိပ်ကနေအောက်ခြေအထိလက်ဝဲဘက်ခြမ်းမှဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ညာဘက်ခြေကျင်းကျော်သင့်ပါတယ်။ အဆိုပါချွေးပေါင်းအိမ် 12 မိနစ် 15 ပြန်သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်ပါတယ်ပြီးနောက်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ဒါဟာမုသားဖို့ထက်တစ်ဦးချွေးပေါင်းအိမ်၌ထိုင် သာ. ကောင်း၏။ ဤသည်ကိုပိုပြီးတည်ငြိမ်တိုက်နယ်သာဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အပေါက်ပိုကောင်းပွင့်လင်းကြသည်။ ဒါကြောင့်ဒီထက်ပူလည်းမရှိသောကြောင့်ချွေးပေါင်းအိမ်မှပထမဦးဆုံးခရီးစဉ်ကိုမှာမဟုတ်ဘဲနိမ့်ဆုံးခုံတန်းရှည်ကိုအသုံးပြုရပါမည်။
အခြေခံအားဖြင့်ချွေးသူ့ဟာသူအတွက်အလွန်ကျန်းမာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကမြှင့်လုပ်ဆောင်ပေမယ့်လည်းသွေးစီးဆင်းမှုကိုလှုံ့ဆျောနှင့်ဂလင်း၏လုပျငနျးခိုင်မာစေမသာသောသန့်စင်အဖျားကဲ့သို့အဆိုပါချွေးပေါင်းအိမ်ပြုမူ။ သို့သော်အားလုံးကုန်ကျစရိတ်မှာချွေးပေါင်းအိမ်ကိုရှောင်ရှားသင့်ကြောင်းအချို့အန္တရာယ်အုပ်စုများရှိပါတယ်။
ဒီလျင်မြန်စွာအဆင်မပြေခြင်းနှင့်မူးဝြေခင်းဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သကဲ့သို့ပြီးသားတစ်အကြီးအကျယ်တင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေဆင်းရဲခံရသောကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများမှာချွေးပေါင်းအိမ်, ရှောင်ကြဉ်ရပါမည်။ နှင့်မျှမတို့ချွေးပေါင်းအိမ်ဖြစ်သင့်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများနှင့်သွေးကြောများ၏နှလုံးသွေးကြောစနစ်နှင့်ရောင်ရမ်းခြင်း၏စူးရှသောရောဂါများ။ အလားတူအလွန်အကျွံအပူကြောင့်ကတည်းက, သွေးတွင်းသကြားဓာတ်အဆင့်ကိုကျနော်တို့မှာအများကြီး drop, ဆီးချိုရောဂါအတွက်မှန်သည်။
သွေးပြန်ကြောရောဂါများ, အထူးသဖြင့် varicose သွေးပြန်ကြောသို့မဟုတ်သွေးကြောရောင်ရမ်းခြင်းကိုလည်းဖယ်စံနှုန်းတွေဟာအဖြစ်ဦးခေါင်းဒေသတွင်း၌မွငျ့မား intraocular ဖိအားသို့မဟုတ်သွေးလည်ပတ်မှုမမှန်။ အသက်သုံးနှစ်အောက်ကလေးများနှလုံးအတှကျအသကျကွီးရှယျအိုမြား, အ vasodilator မူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ်ဆေးဝါးအဖြစ်ချွေးပေါင်းအိမ်၌ရှိသကဲ့သို့အနည်းငယ်သာကစားကြသင့်ပါတယ်။
အားလုံးတခြားသူတွေကိုကချွေးပေါင်းအိမ်ထဲတွင်အပူသုံးစွဲဖို့, ဆောင်းတွင်းလအတွင်းအပေါင်းတို့ထက်ကျိုးနပ်သည်။ ကိုယ်ကသာအရေးကြီးပါတယ်, ထို့နောက်ပြန်အရည်ဆုံးရှုံးခြင်း replenish ။
ဒါခေါ်ချွေးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအားဖြင့်ကွယ်ပျောက်ဒီအားဖြင့်တစ်ဦးသည်အလွန်ကြွက်သားရှောင်ရှားသို့မဟုတ်လျှော့ချခြင်းနှင့်ဖြေလျော့ပေးခြင်းသည်ကြွက်သားများတွင်ရလဒ်များသောကြွက်သားကနေပို့ဆောင်နေကြသည်။ တောင်မှသေးငယ်ကြွက်သားဒဏ်ရာသို့မဟုတ် -verspannungen နဲ့ချွေးပေါင်းအိမ်ထောကျအကူပွုစေနိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာသွေးခုန်နှုန်းဟာငြိမ်ဝပ်ရာအဆင့်ကိုပုံမှန်နိုင်အောင်, ထိုချွေးပေါင်းအိမ်သွားဖို့သာထို့နောက်မှာအနည်းဆုံး 30 မိနစ်ခဏနားပြီးကျန်တာတွေကိုလေ့ကျင့်ခန်းအပြီးတွင်မှသို့သော်အရေးကြီးသည်။ သို့သော်ထိုသို့လျော်ကြေးပေးအားကစားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့သောအရည်ဆုံးရှုံးခြင်း, အထက်အရေးကြီးပါသည်။
တစ်ဦးကချွေးပေါင်းအိမ် session ကိုအကောင်းဆုံးမှာနှစ်ခုမှသုံးချွေးပေါင်းအိမ်အစည်းအဝေးများရှိရေးသငျ့သညျ။ သို့သော်ရှိသမျှသောချွေးပေါင်းအိမ်အပတ်အတွင်းသွားရောက်လည်ပတ်နေသည်ဘယ်လောက်မကြာခဏပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အဲဒါကိုသုံးချွေးပေါင်းအိမ်အစည်းအဝေးများလက်မ၏စည်းကမ်းအတိုင်းတပတ်ထဲမှာချွေးပေါင်းအိမ်တစ်တစ်ခုတည်းခရီးစဉ်အတွင်းပြီးစီးစေခြင်းဟုဆိုနိုငျပါသညျ။ တစ်ပတ်အတွက်ချွေးပေါင်းအိမ်နှစ်ခုလည်ပတ်မှုမှာတော့နှစ်ခုချွေးပေါင်းအိမ်အစည်းအဝေးများပြုရပါမည်နှင့် sauniert နေ့စဉ်တစ်ခုသာချွေးပေါင်းအိမ်ပြုရပါမည်သည့်အခါ။
ဒါဟာအမြဲသူ့ခန္ဓာကိုယ်နှင့်သူ၏သုခချမ်းသာဖို့အာရုံစိုက်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ ဒါကြောင့်ယေဘုယျအားဖြင့်တစ်ဦးရှည်လျားသောချွေးပေါင်းအိမ် session ကိုကြာရှည်သင့်တယ်လိုပဲဆိုပါတယ်မရနိုင်ပါ။ ဇီဝအခြေအနေပေါ်တွင် မူတည်. 10 နှင့် 15 မိနစ်အကြားနေထိုင်အကြံပြုသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြောပါကရှည်လျား lukewarm အဖြစ်ချွေးပေါင်းအိမ်နေပိုကောင်းတဲ့တိုတိုနဲ့ပူသည်။
အဝတ်အချည်းစည်းဒါမှမဟုတ်ချွေးပေါင်းအိမ်များတွင်ဝတ်ဆင်? ဤမေးခွန်းကိုများစွာသောလူ။ ဒါကြောင့်အများအပြားချွေးပေါင်းအိမ်ဧည့်သည်များအထူးသဖြင့်ရောထွေးချွေးပေါင်းအိမ်ဒေသများရှိတစ်ဦးသုတ်ပဝါသူတို့ကိုယ်သူတို့ဖုံးလွှမ်းရန်အနည်းငယ်ထပ်ထည့်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်, မနှစ်မြို့ဖွယ်ဖြစ်ပါသည်ဒါပေမယ့်အဖြစ်ဂျာမနီမှာက, အချွေးပေါင်းအိမ်အတွက်အဝတ်အချည်းစည်းသွားကြဖို့ဘုံဖြစ်ပါတယ်။
တချို့ကချွေးပေါင်းအိမ်ချစ်သူများကတိုးလာဘက်တီးရီးယားကြီးထွားရန်ရေကူးဝတ်စုံများ၏ဒေါသကိုမှတဆင့်ကြွလာသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ သို့သော်ဤစမ်းသပ်မှုတွေမှဘာသာရပ်ဖြစ်ဘယ်တော့မှနိုင်ဘူး။ အဆိုပါချွေးပေါင်းအိမ်တစ်အလည်အပတ်ခရီးခွင့်ပြုပါရန်, အများပြည်သူအတွက်အဝတ်အချည်းစည်းသူတို့ကိုယ်သူတို့ပြသရန်မကြိုက်ဘူးတဲ့သူကိုတောင်လူတွေကိုဒါခေါ် "ခြောက်သွေ့တဲ့အပူပေးခန်း" သို့မဟုတ်သီးခြားချွေးပေါင်းအိမ်ခန်းရှိပါတယ်။ ဖင်လန်နိုင်ငံအဝတ်အချည်းစည်းပေမယ့် sauniert အများပြည်သူအမြဲကွဲကွာနေချိန်တွင်သာအဝတ်အချည်းစည်းအသိုင်းအဝိုင်းချွေးပေါင်းအိမ်၏အနီးကပ်မိသားစုသို့မဟုတ်စက်ဝိုင်းများကသွားရောက်ကြည့်ရှုသောဤယဉ်ကျေးမှုသတ်သတ်မှတ်မှတ်ရှိပါတယ်။
ရောနှောသို့မဟုတ်သီးခြားချွေးပေါင်းအိမ်ခန်းများတွင်ဖြစ်စေ, အမြဲအိမ်နီးချင်းများစီးနင်းရန်နေရာလွတ်တစ်ခုလက်မောင်းရဲ့အရှည်ရှိသင့်ပါတယ်။ မသင့်လျော်ကိုလည်းကွာဟမှုအတွက်မလိုလားသောဆှဲဖြစ်ပါတယ်။ အခြားလက်ျာဘက်ရှိလြှငျကိုနောက်ကထိုင်ရန်, မေးမြန်းဖို့ပိုကောင်းအမြဲယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး။
နိဂုံးချုပ်မှာတော့ကျနော်တို့အပူပေးခန်းတစ်ခုလုံးကိုခန္ဓာကိုယ်နှင့် psyche အပေါ်အများအပြားကနျြးမာရေး-မြှင့်တင်သက်ရောက်မှုရှိသည်သာပြောနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါအရေးကြီးသောအရာပဲချွေးပေါင်းအိမ်ပုံကြီးချဲ့မဟုတျကွောငျးကိုဂရုစိုက်သည်။ အဆိုပါချွေးပေါင်းအိမ်နောက်တဖန်နှင့်ပြည့်စုံသုံးချွေးပေါင်းအိမ်အစည်းအဝေးများသွားရောက်တစ်ပါတ်ဖြစ်ပါတယ်အကြံပြုခဲ့သည်။ ပြီးသားရောဂါရောဂါများနှင့်အတူအစဉ်မပြတ်ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပေမယ့်ပထမဦးဆုံးချွေးပေါင်းအိမ်မရောက်မီရပါမည်။
အရောင်ဝိညာဉျတျော / တစ္ဆေ
အပန်းဖြေနည်းစနစ် | ကျန်းမာအပန်းဖြေ
လူကြီးများအတွက် Hummingbird ကို Coloring
လူကြီးများအတွက် Coloring ပန်းပွင့်
လူကြီးများအတွက် Koala Coloring
လူကြီးများအတွက် Coloring - Tukan